Faah Faahino laga helaya duqeyn ka dhacday gobalka Hiiraan | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Faah Faahino laga helaya duqeyn ka dhacday gobalka Hiiraan
Faah Faahino laga helaya duqeyn ka dhacday gobalka Hiiraan
Faahfaahino ayaa ka soo baxaya duqeyn Diyaaradeed oo isniintii la soo dhaafay ka dhacday deegaan lagu magacaabo Jil-Jiiley kaa oo qiyaastii 18 KM u jira deegaanka Ceel Cali oo dhaca galbeedka Magaalada Baladweyne.
Duqeeyntan ayaa lala beegsaday xero tababar oo Al Shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi iyadoona la sheegay in xeradaasi iyo gooba ka ag dhawaa ay ku dhaceen ilaa iyo 7 gantaal oo ay diyaaradaha rideen.
“Wallaalow Duqeynta Isniintii gelinka dambe ayay dhacday, markii hore cabsi ayaan dareenay, waxaana lala beegsaday meel ay deganaayeen Al-shabaab, khasaare wuu jiraa laakiin intaas waaaye kuma dhihi karo.” Ayuu yiri Qof ka mid ah dadka degaanka.
Wali lama oga dalka laga leeyahay diyaaradaha duqeenta ka geystay deegaanka jil-jiiley balse waxaa xusid mudan in dowladda Maraykanka ay kordhisay duqeymaha dhanka cirka ah ee ay la beegsato Al Shabaab.